E-Quebec: Abukho utshwala notshwala kwabangakagonywa
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Canada » E-Quebec: Abukho utshwala notshwala kwabangakagonywa
E-Quebec: Akusekho utshwala nezidakamizwa ezingagonyiwe
Izakhamizi zaseCanada eQuebec zizodingeka ukuthi zethule ubufakazi bokugonywa kwe-COVID-19 ukuze zifinyelele ezitolo zotshwala nezitolo zensangu.
Ngokusobala, abaphathi besifundazwe esisodwa saseCanada kulindeleke ukuthi bamemezele ngokuhamba kwesikhathi kuleli sonto, ukuthi kuzodingeka ubufakazi bokugomela i-COVID-19 kuzo zonke izitolo zotshwala nezitolo zensangu.
Quebec UNdunankulu uFrancois LegaultAbaphathi banethemba lokuthi ukunqamula abahlali abangagonyiwe ophuzweni oluqinile nensangu kungase kuphoqe okungenani abantu abathile ukuthi bagonyelwe i-coronavirus.
Ngokwemibiko yakamuva, imininingwane emincane yegunya lakamuva, njengokuthi udinga yini iphasiphothi yokugomela i-COVID-19 ezindaweni zokungena noma kumarejista emali, isalungiswa.
Ubufakazi bokugoma sebuvele budingeka ngaphakathi Quebec ezindaweni ezingabalulekile njengezindawo zokudlela, amatiyetha, amabha, namakhasino. Ngaphansi kwalo mthetho omusha, izakhamuzi ezingagonyiwe zisazokwazi ukufinyelela ezitolo ezidayisa ubhiya newayini, kodwa zizovinjelwa ngokusemthethweni ukuthi zithenge utshwala obuqinile.
Lesi sinyathelo kusolakala ukuthi siza phakathi kwengcindezi yomphakathi yokuqinisa imingcele kumaQuebeckers angafuni ukuthola isibhamu sabo se-COVID-19. ULegault kubikwa ukuthi ubuze izikhulu zezempilo zomphakathi ukuthi yiziphi ezinye izinhlobo zamabhizinisi ezingaphoqeleka ukuthi zifune amaphasipoti okugoma, futhi utshele izintatheli, "Ngiyaqonda ukuthi kunentukuthelo ethile" kuzakhamizi ezingagonyiwe.
Cishe u-85% wabo bonke Quebec abahlali bathole okungenani umthamo owodwa wokugoma, okungelinye lamanani aphezulu kakhulu emhlabeni, kodwa lokho akuzange kumise ukusabalala kwe-COVID-19. Isifundazwe sibone izifo ezibalelwa ku-15,000 ezintsha nsuku zonke kuleli sonto eledlule. Amacala amasha abengaphansi kuka-700 nsuku zonke ngaphambi kokuvela kwe-Omicron ye-COVID-19 ngasekupheleni kukaNovemba.
Okuningi ku-: Covid-19 | Quebec
Izindimbane zabafuduki abangekho emthethweni zigcwele i-UK ngo-2021
Ungakhathazeki: Ijaji lenqaba icala elixakile 'le-porn yengane' elibhekene ne-Nirvana
Januwari 5, 2022 ngo-06: 13
LOL mfana undunankulu uyisihluleki esidabukisayo. i-LCBO iseduze nehora futhi inamanani angcono.